Ziziphi I-Train Routes odume And Historical | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Ziziphi I-Train Routes odume And Historical
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 24/04/2020)
I whooshing isandi uloliwe umzobo ube station, kwaye ithuba lokufumana nabemkayo zifika kwindawo ethile. Ngaba ucinga into engcono kunokuba Famous kunye Historical Train Routes?
Oololiwe kukhunjuzwa i Golden Age of yokuhamba. Xa abantu bahamba iinyanga ngexesha kunye amahashe mhlawumbi ababandakanyekayo. Iindawo ezinika umdla wayengekho malunga ukuzanelisa kwangoko nokukhangela kuphela phambili kuyo.
Hayi, zokuhamba kwakuthetha yokuchitha i uhambo. Ukupakisha ku eziqwini, kwaye nebar ikhampasi kunye eziliqela iimephu elungileyo. Iindawo ezinika umdla kwakuthetha ukuya kwindawo apho wayesazi kungekho namnye, apho nkqu umoya waziva engaqhelekanga kunye nekhaya lakho ileta angafika kuphela emva kokubuya yakho.
Xa Mangeni imo ezanelisayo yokuthutha, Gcina A Uloliwe wakungenisa uluhlu lwe Famous nezembali imizila kaloliwe kufuneka angenise 2019!
London eVenice kwi Orient Express – The Longest Famous and Historical Train Routes
Oku kuya kakhulu ngokuqinisekileyo kabini ukuya njengosuku wembali! This is possibly the most Famous and Historical Train Routes and a uloliwe romantic indlela emhlabeni. Isuka eParis kwi eya kwisixeko Byzantine ka Istanbul. Wena kungase itikiti eqhelekileyo ukusuka SaveATrain ukuhamba kulo mzila, okanye uphume ngokuba elihle kakhulu ukhetho kwaye xhumela kwi Orient Express. Le ngamayelenqe kwalo loliwe zodidi ke adumileyo iphefumlelwe Agatha Christie. Ezi ntsuku akukho nto elide zokusebenza uhlobo yayo yoqobo kodwa nomoya walo ohlala kulo Belmond kaThixo Venice-Simplon Orient Express. Kukho oololiwe ezimbini, inyaniso, enye neenqwelwana obusuka evela 1920 30 yaye omnye a wembali uloliwe British Pullman.
Indlela entsha imimoya indlela yayo ku London eVenice, isihlandlo kubandakanya ezinye kwiindawo eYurophu, kwaye original kanye ngonyaka-Paris-Istanbul uhambo ngo Agasti.
Amatikiti oMilan ukuya eVenice
UFlorence ukuya kwitikiti laseVenice
IRoma ukuya eVenice itikiti loLoliwe
Kufuneke u ukuhamba ngololiwe ukuba kuthuthwa wokuweza. Oku ngokuqinisekileyo enye kwiindlela Famous nezembali uloliwe kufuneka angenise 2019!
ke, kwenzeka ntoni xa ufika Ferry? Ngethamsanqa abakhweli uloliwe bayakwazi ukufumana off kuloliwe aze onwabele intle kanye ababe- phenyane. Uya niwele ulwandle lweBaltic ngo 45 imizuzu. Lonke uhambo ihlala 4 iiyure kwaye 45 imizuzu. Copenhagen rye evulelekile ababemi sandwich elimangalisayo buhle kuyilo onengqondo Uloliwe itikiti kude baphuma eHamburg, Jemani ukuba ungakwazi Yebo, ukuthenga nathi, uya kuba iqhosha ekupheleni kwale post blog.
Ixhuma ezimbini Switzerland eyona ezibukekayo intaba zokulala, Zermatt ne St Moritz, i Glacier Express yeyona ndlela Ukuthanjiswa ukuba ukonwabela ubuhle lexi hlamarisaka zaseSwitzerland. Kutheni ndizinyulele le njengenye iindlela ezininzi Famous nembali uloliwe kufuneka angenise 2019?
Ukuhamba ngasempumalanga evela Zermatt, kumaqweqwe uhambo imini yonke 91 imigudu kanye 291 imizila njengoko uqengqa amadlelo zasezintabeni edlulileyo kumazantsi eSwitzerland, yamandulo amachibi, inemizana picture-ukugqibelela. Iimbalasane uhambo ziquka Oberalp Pass, indawo kakhulu kwi ukhwele kwi 6706 ezinyaweni. Enye i odumileyo Landwasser Viaduct - omangalisayo-arch ezintandathu isakhiwo emi 200 iinyawo olwandle ibe itonela usike ngqo eqeleni.
Interlaken ku Zermatt Uqeqesha
I-Lucerne ukuya kwiitiketi zeZermatt zoLoliwe
West Highland Line, Glasgow to Mallaig - eScotland
Ngoku ukuba ulikhoboka series TV Outlander, egxile endala-school Scotland zinkomo. Ngoko ke akukho nto le nto kuluhlu lwe Famous kunye Historical Train Routes. I-West Highland Line yeyona ndlela ebalaseleyo ukuba sasendle lizwe, ugu. Xa uloliwe amagqabi Glasgow - sixeko sikhulu eSkotlani i-- imbonakalo yedolophu ngokukhawuleza afe isikhotha glens kunye lochs ezolileyo. Isihloko ngasentla, eWest Highland Line udlula entlango esemaphandleni Rannoch YamaSilamsi. Emva koko iye idlule ayafika Ben Nevis, irwece phantsi e Fort William. Ukutshintshela ulwalathiso nokuya ngasentshonalanga, uloliwe icanda i Glenfinnan Viaduct (evezwe Harry uMbumbi ifilimu series) phambi kokuba bafike entlanganisweni kwizibuko eyenziwa ka Mallaig.
Amsterdam ukuya eLondon amathikithi etreyini
Iitoni zaseLyon ukuya eLondon zoLoliwe
Adumileyo kunye Historical Train Routes eNgilani
zokuhamba zizithuthi wayengomnye igalelo elikhulu British of the yeVictorian Age. Kwinkulungwane yama-20, zibonakala kaloliwe ngehlombe kaloliwe bama ukuba ziye zanda phantse ngokukhawuleza njengoko bakwaloliwe ngokwabo. oololiwe umphunga Historic, ezizodwa uhambo bemvelo, nololiwe gauge emxinwa ziye zabuyiselwa. Apha, uya kufumana ezinye uloliwe best zomphunga kunye nelifa uhambo olumnandi. Fumana nabo West Country counties of yaseCornwall, Devon, Somerset, no Dorset.
Njengoko ezininzi yezi oololiwe buyisa oololiwe umphunga, Gcina A Uloliwe ayinikezi amatikiti kubo. kunjalo, senza unike intengo engcono sokubanjwa ukuya nokubuya Izikumkani Ezimanyene.
Ufuna ukuba iindlela uloliwe Famous nezembali?
Intloko phezu ku Gcina A Isitimela nencwadi itikiti lakho 3 imizuzu.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye itekisi asinike nje ngetyala nge link kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffamous-historical-train-routes%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml kwaye bangatshintsha / ru ukuba / es okanye / de kwiilwimi ezininzi.
#odumileyo #FamousTrains #HistoricTrains europetravel longtrainjourneys Isikhululo sikaloliwe tips uloliwe train Travel